နံပါတ်အရေး။ | Martech Zone
စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 29, 2011 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 29, 2011 Douglas Karr
လေးစားခံရတဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာက“ ဂရုမစိုက်ပါနဲ့ နောက်လိုက်အရေအတွက် သင်မှာ .... ရှိသည်။" နှင့် "ဒါဟာအရေးမပါဘူး ဘယ်နှစ်ယောက်ပရိတ်သတ်တွေ သင်မှာ .... ရှိသည်"။ သူတို့မှားနေပြီ တကယ်လို့အရေးမကြီးဘူးဆိုရင်သူတို့ကိုရေတွက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါတို့ အရာအားလုံးကိုရေတွက်ပါ... ပြီးတော့ငါတို့တွေ့တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအားဖြင့်လူတိုင်းကိုစီစစ်တယ်။ ကျွန်တော်ရှင်းပြပါရစေ။
လက်ရှိတွင် Klout နှင့်သူတို့ပြုလုပ်ခဲ့သည့် algorithm ပြောင်းလဲမှုများအပေါ်တန်ပြန်မှုများရှိသည်။ စီးပွားဖြစ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအမှတ်ပေးနည်းစနစ်သည်ပြောင်းလဲသွားပြီးလူအများ Klout ရမှတ်များကျဆင်းသွားသည်။ အများစုမှာအချက် ၁၀ ချက်ခန့်ရှိပြီးအများစုသည်အချက် ၂၀ အထိကျဆင်းသွားသည်။ Klout သည်ပြောင်းလဲမှုကိုကာကွယ်ခြင်းအားဖြင့် algorithm အသစ်ပြောင်းလဲခြင်းသည်တစ်စုံတစ် ဦး ၏အွန်လိုင်းသြဇာကိုပိုမိုတိကျသောအရိပ်အမြွက်ဖော်ပြပေးသည်။
လူတွေကဂရုမစိုက်ပါဘူး ဟုတ်မှန်ရေး။ သူတို့ဂရုစိုက်တယ် ဂဏန်း.
ငါသံသယမဝင်ဘူး Klout ရဲ့ရည်ရွယ်ချက် ကြီးမြတ်ခဲ့ကြသည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ၇၁ မှတ်ဖြင့် Klout ရမှတ် ၆၁ သို့ရရှိခဲ့သည်။ ယခုအပတ်တွင် ၆၁ မှတ်ဖြစ်သည် ဘာမြှ အရေအတွက်ကသူ့ဟာသူရိုးရှင်းစွာဆက်စပ်မှုတစ်ခု gauge ကတည်းက။
သို့သော်အဖြစ်မှန်မှာကိန်းဂဏန်းရမှတ်သည်လူအများအတွက်အွန်လိုင်းသြဇာနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုဂရုပြုရန်အရေးကြီးသောအရာဖြစ်သည်။ Klout သည်လအနည်းငယ်အတွင်း algorithm ကို pinch ကိုချိန်ညှိလိုက်လျှင်သူတို့ကတန်ပြန်တန်ပြန်မှုကိုမရကြပေ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အားထုတ်မှုကိုအလားတူသူတစ် ဦး ဦး နှင့် align လုပ်ပြီးသူတို့၏ရမှတ်သည်တသမတ်တည်းရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ပုံပန်းသဏ္droppedာန်ကျဆင်းသွားလျှင် စနစ်၏အရည်အသွေး မေးခွန်းသို့သွားသည်။ ဒါကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် ... နှင့် Klout ယခုတူးဖို့ကြိုးစားနေသည်။
ကျနော့်အမြင်အရ Klout သည်ရမှတ်များကိုလျှော့ချခြင်းထက်စကေးကိုတိုးမြှင့်ရုံမျှဖြင့်ပိုကောင်းသည်။ အကယ်၍ ချိန်ခွင်လျှာသည်ယခင်က ၁၀၀ ဖြစ်လျှင်၎င်းတို့ကို ၁၁၅ သို့တိုးမြှင့်ရုံသာပြုသင့်သည်။ ညှိနှိုင်းမှုသည်ပြည်သူ့ကလော့တ်ရမှတ်များပြောင်းလဲမှုကိုအရေးမပါတော့သည်။ ငါကျော်သွားမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Klout အောင်မြင်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည့်အရာ၏ပရိသတ်တစ် ဦး ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ (၎င်းသည်ရှာဖွေရေး (သို့) traffic စာရင်းများထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရမှတ်ဟုထင်နေဆဲဖြစ်သည်)
ကိန်းဂဏန်းများသည်အရေးကြီးသည်ကိုသင်မယုံလျှင်သင်ကိုယ်တိုင်နောက်တာပါ။ အကြိမ်များစွာတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပရိသတ်0၀၊ နောက်လိုက် 0၊ ပြန်ကြည့်ချက် 0၊0ကြည့်၊ အကြိုက်0စသည်တို့ရှိသောဖောက်သည်များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မကြာသေးမီက ၀ ယ်ယူသူတစ် ဦး သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မှတ်တမ်းတင်ထားသောသူတို့၏ထုတ်ကုန်ကိုအလွန်ပြောင်မြောက်သောသရုပ်ပြချက်ဖြင့်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဗီဒီယိုရှိသည်။ ပြproblemနာကဗွီဒီယိုဖိုင် ၁၁ ခုခန့်ရှိသည်။
လူအနည်းငယ်ကသာ ၁၁ ယောက်ကြည့်သောဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုရန်အချိန်ယူကြသည်။
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကအခြားသူများကိုခေါ်ပါလိမ့်မယ်လုပ်ခဲ့တယ် စော်ကား။ လအနည်းငယ်နှင့်ရာပေါင်းများစွာအမြင်များပြီးနောက်, ငါထွက်သွား။ နှင့် 10,000 အမြင်များဝယ်ယူခဲ့သည် နှင့် 1,000 အကြိုက်ဆုံး ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုမှ ၎င်းသည်တရားမ ၀ င်ပါ။ မည်သူမဆို ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းမရှိပါ။ အသံမြည်တယ် ရိပ်ရတဲ့သို့သော် ၂ ပတ်အတွင်း Youtube ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုသူ ၁၀,၀၀၀ အထိပြောင်းခဲ့သည်။ တစ်ပါတ်အကြာတွင်နှင့်ဗီဒီယိုယခုမှာထိုင်နေသည် 12,000 ကျော်အမြင်များ နှင့်စုံတွဲတစ်ဒါဇင်ပိုပြီးအကြိုက်။ တူညီသောဗီဒီယိုနှင့်တူညီသောအကြောင်းအရာ၊ ယခုတစ်ဒါဇင်ကို ၂၀၀၀ အစားတစ်ပတ်လျှင်ကြည့်ရှုခြင်းပေါင်း ၂၀၀၀၀ ထည့်နိုင်သည်။
~ 50,000 နောက်လိုက်များနှင့်အတူလူစု Twitter မှတစ်နေ့လျှင်နောက်လိုက် ၅၀ ကိုထည့်နိုင်သည်။ တွစ်တာသို့အသစ်ရောက်ရှိလာသောသူအတွက်လတစ်လတွင်နောက်လိုက် ၅၀ ထပ်ပေါင်းခြင်းသည်ကောင်းလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာဘယ်လောက်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာကိုဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ပျမ်းမျှတွစ်တာအသုံးပြုသူတိုးတက်လာလိမ့်မယ် အချိုးကျ သူတို့ရဲ့လက်ရှိအောက်ပါရန်။ သူတို့ကြီးထွားနှုန်းကိုအရှိန်မြှင့်ချင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့နံပါတ်တွေကိုတိုးမြှင့်ဖို့လိုတယ်။ နောက်လိုက်များကနောက်လိုက်များကို ၀ ယ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုငြင်းဆိုသည် ကြောက်မက်ဘွယ်သော။ သူတို့မှာထောင်နဲ့ချီတဲ့နောက်လိုက်တွေရှိနေပြီဆိုတာကိုပြောဖို့သူတို့အတွက်လွယ်ပါတယ်။
နံပါတ်များနှင့်အတူပြproblemနာကိုသူတို့အမြဲတမ်းတက်လာကြဘူးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Twitter အောက်ရှိ autofollow အကောင့်တစ်ခုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရမှတ်သာမက၊ Klout ကိုယ်တိုင်လည်း (အလုပ်နှင့်စတော့ဈေးကွက်အပေါ်သြဇာညောင်းသည်)
နံပါတ်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်လွယ်ကူသည်။ ဘလော့တစ်ခု၏လူကြိုက်များမှုအဆင့်ရွှေစံသည်သင်၏ Feedburner အရေအတွက်ရှိသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ဂျီမေးလ်သည်အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာတွင်ရောက်လာပြီးလူများအားအီးမေးလ်လိပ်စာတွင်မှတ်ချက်တစ်ခု ပေး၍ လူများအားအီးမေးလ်လိပ်စာများခွင့်ပြုသည်။ ဥပမာအီးမေးလ်လိပ်စာ name@domain.com ဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်အသုံးပြုနိုင်သည် name+1@domain.com, name+2@domain.com, name+3@domain.com, စသည်တို့။ ဘလော့ဂါအချို့သည်ဤအရာကိုစွဲကိုင်ပြီးထောင်ပေါင်းများစွာသောသုံးစွဲသူများအားသူတို့၏ကိုယ်ပိုင် Feedburner အီးမေးလ်တွင်စာရင်းသွင်းရန် scripts များကိုသာရေးသားခဲ့သည်။
ရလဒ်? သူတို့၏ဘလော့ဂ်များသည်တစ်ညတည်းလူကြိုက်များခဲ့သည်။ တချို့ကကြော်ငြာတွေနဲ့စပွန်ဆာပေးတာတွေကိုတောင်ရောင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဘလော့ဂ်တစ်ခုတွင်ဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခုကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီးတုံ့ပြန်မှုရာပေါင်းများစွာကိုရရှိခဲ့သည် ဘလော့ဂ်ရဲ့ရာထောင်ချီသောစာရင်းသွင်းသူ။ ဒါဟာငါ့သံသယအတည်ပြုခဲ့သည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့နံပါတ်များကိုဖောင်းခဲ့သည်။
နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်သည်လူကြိုက်များမှုနှင့်စာဖတ်ပရိသတ်တွင်တိုးပွားလာဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မည်သူမဆို၏စံနှုန်းများဖြင့်လူကြိုက်များသောဘလော့ဂ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဒါပေမယ့် ... သူတို့အားဘလော့ဂ်များ လိမ် အများဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်ငါ့ရှေ့ဆက်နေဆဲဖြစ်သည်။ သူတို့မှာကြီးထွားမှုကိုအရံအဖြစ်သိမ်းဆည်းဖို့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်၊ ငါနောင်တမရဘူး လိမ်လည် သူတို့လိုပဲ? တကယ်တော့ဟုတ်တယ်။ ငါနောင်တရ ငါသူတို့ထသောအခါသူတို့ကိုငါအခွင့်အလမ်းများကိုအားသာချက်ယူသင့်ပါတယ်။
သင်ဘာမှမဝယ်နိုင် နောက်လိုက်များ၊ ပရိသတ်များ၊ Retweets၊ Likes များ၊ Pageviews၊ Youtube Views, Youtube ကိုနှစ်သက်သည်၀ န်ဆောင်မှုတွေအားလုံး ၀ က်ဘ်မှာရှိတယ်။ ဒီစနစ်တွေအများကြီးကိုငါစမ်းသပ်ပြီးအချို့ဟာအခြားသူတွေထက်ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်။ မေးခွန်းကကျနော့်အမြင်အရဒီဟာတွေဟာကိုယ်ကျင့်တရားမှန်၊ မမှန်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ မေးခွန်းကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုပါ။ လုပ်နိုင် နံပါတ်များကိုဝယ်ယူ အမှန်တကယ်အွန်လိုင်းကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ထင်သာမြင်သာမှုနှင့်လူကြိုက်များမှုကိုတိုးပွားစေသလား။ တခါတရံ…အဲဒါကသင့်ရဲ့မြှင့်တင်ရေးဟာဘယ်လိုဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာပေါ်မူတည်တယ်။
ငါ၌ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ကျွန်ုပ်ပေးဆပ်ရသည့်အတွက်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေသောကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများရှိသော်လည်းတစ်ပါတ်အကြာတွင်သူတို့ကသူတို့ရှိသည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ကိုမြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်အားတောင်းဆိုနေကြသည်။ တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်…သူတို့ကတစ်နည်းနည်းနဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားမှားယွင်းနေတာလို့ထင်ကြပေမယ့်အကျိုးကျေးဇူးရနိုင်မယ့်အချိန်ကိုရောက်အောင်ကြိုးစားပါ။
ငါမယုံဘူး နံပါတ်များကိုဝယ်ယူ မှားယွင်းနေသည်။ အခြားအရာများကဲ့သို့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်သည်။ ပြနာမှာသင်သည်ထိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအမြတ်ထုတ်ရန်နှင့်အောက်ပါအတိုင်းကြီးထွားရန်အကြောင်းအရာများကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်မလားဆိုသည်မှာဖြစ်သည်။ သင်မလုပ်ခဲ့လျှင်သင်ငွေဆုံးရှုံးသွားသည်။ သင်၏အိတ်ကပ်ထဲ မှလွဲ၍ မည်သည့်အန္တရာယ်မျှမရှိပါ၊ မည်သူ့ကိုမျှမညစ်ညမ်းစေပါ။
မှတ်စု: ငါယုံတယ် လိမ်လည်လှည် သင်မသိသောနံပါတ်များကို အခြေခံ၍ ကြော်ငြာကိုရောင်းရန်။
ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူအများစုကကျွန်တော့်ကိုအပြင်းအထန်သဘောမတူကြဘူး။ ၎င်း၏အဓိကအချက်မှာကြော်ငြာခြင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းဆိုတာဘာလဲ။ အရာအားလုံးသည်အော်ဂဲနစ်ကြီးထွားမှုအပေါ်မူတည်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်း၌မရှိတော့ပါ။
ငါလျှင်လူကြိုက်များခြင်းနှင့်စားသုံးသူအပြုအမူကိုကြိုးကိုင်နေသလား ပရိတ်သတ်တွေကိုဝယ်? ဟုတ်ကဲ့!
အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုတီထွင်ရန်အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်းပညာရှင်တစ် ဦး ကိုငှားရမ်းသောအခါ၎င်းထက် ပို၍ ကြီးမားသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပုံပေါ်လာစေရန်ငါကြိုးစားအားထုတ်နေသလား။ ဟုတ်ကဲ့!
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုလိုအပ်သောအလားအလာရှိသောခေါင်းစဉ်တွင်ရုပ်ပုံတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်စီးပွားရေးရလဒ်များကိုတိုးမြှင့်စေရန်စားသုံးသူများ၏အပြုအမူများကိုအသုံးချခြင်းဖြစ်သည်။ လူအများစုကဂရုမစိုက်တာကိုငါမကူညီနိုင်ဘူး သေးငယ်တဲ့နံပါတ်များ... ဒါပေမယ့်ငါကဂဏန်းကိုပြောင်းနိုင်အောင်သူတို့ဂရုစိုက်တယ်!
စျေးကွက်မြှင့်တင်ခြင်းသည်လူတို့အားသင်၏တံခါးဝသို့ရောက်စေသည်။ ဒါဟာသင်၏တာဝန်ဖြစ်သည် မျှော်လင့်ချက်များထား။ သူတို့ကိုကျော်လွန် သင့်ဖောက်သည်များနှင့်အတူ အကယ်၍ သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်သင်မအောင်မြင်နိုင်ဟုမျှော်လင့်ပါကသင်လိမ်နေပြီးမှားသည်။ အကယ်၍ သင်သည် Youtube ရှုထောင့်များစွာကို ၀ ယ်ပါကသင်၏ဗွီဒီယိုသည်ပျံ့နှံ့သွားပြီးပျော်ရွှင်သောဖောက်သည်များအားထုတ်ကုန်တစ်တန်ကိုရောင်းလိုက်လျှင်၎င်းသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်သည်။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရှားပါးသည်။ လူတစ် ဦး၊ ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်နေမှသာကျွန်ုပ်တို့ရင်းနှီးမြှပ်နှံမည်မှာသေချာသည်။ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့် client နှင့်အလုပ်လုပ်နေစဉ်။ အခြေအနေအားလုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုများကို၎င်းတို့အားကြီးထွားစေရန် kickstart အဖြစ်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ သူတို့ကြီးပွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်မလိုအပ်ပါ။
သင်မည်မျှကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။ သင့်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်ရန်တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ ၅၀၀၀ ၀ ယ်ပါ တစ်ခုခု၏ကြီးထွားမှုအရှိန်မြှင့်ပုံကိုကြည့်ပါ။
Nokia Advertising …နောက်တစ်ခု Windows Phone
29:2011 pm တွင်အောက်တိုဘာ 8, 13
အလွန်ဆွဲဆောင် သို့သော်ကြယ်ငါးပွင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုဝယ်ယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။
29:2011 pm တွင်အောက်တိုဘာ 10, 36
အငြင်းပွားစရာကတော့ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးအစီအစဉ်များသည်လင်းနို့ချက်ချင်းပင်စတော့ရှယ်ယာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုပေးသည်။ အထက်တွင်ကျွန်ုပ်၏လှုံ့ဆော်မှုမှာအများပြည်သူအနေဖြင့်အများပြည်သူလွှဲပြောင်းယူနိုင်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရောက်ရှိရန်သာဖြစ်သည်။ ဒီဟာကငါတို့တစ်ခုတည်းသောနည်းဗျူဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဤမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်မြှင့်တင်ရေးကိုပြုလုပ်နေသည် - သြဇာသက်ရောက်သူများအားထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများပြုလုပ်ရန်တောင်းဆိုခြင်း။ သူတို့ကိုလိမ်ဖို့သူတို့ကိုငါမပေးခဲ့ဘူး။ ငါတို့တကယ်ထုတ်ကုန်ကိုပေးခဲ့တယ်။ ငါထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ရိုးရှင်းသော "နံပါတ်" ထက်ထောက်ခံမှုအများကြီးပိုယုံကြည်ပါတယ်။
လူအများစုကကြယ်ငါးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုကောင်းစွာမတုံ့ပြန်ကြတာလည်းကျွန်တော်ထပ်ထည့်ချင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများကကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများသည်ရောင်းအားကျဆင်းသွားသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်၍ အဆင်မပြေမှုများကိုကြည့်ပြီးနောက်လူများသည်ကြယ် ၄ ပွင့်ထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူခဲ့သည်။ အဲဒါကသူတို့ကိုအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေတဲ့အရာဖြစ်ခဲ့ရင်သူတို့ ၀ ယ်ကြလိမ့်မယ်။
ဒါဟာ ၀ ယ်သူရဲ့အပြုအမူအတွက်စိတ် ၀ င်စားစရာနောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
29:2011 pm တွင်အောက်တိုဘာ 11, 06
စဉ်းစားဟန်တုံ့ပြန်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမှန်မှာသူစိမ်းများအနေဖြင့်အလေးအနက်ထားခြင်းမပြုမီသင်ဖြတ်ကျော်ရန်လိုအပ်သည့် Phantom အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်လိုက်အရေအတွက်သည်စျေးကွက်၏ဝတ်စုံဖြစ်သည်။
သို့သျောလညျးငါပဲဒါကြောင့် ... icky ရှာပါ။ ဒီထက်ပိုပြီးဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အချိန်မှာလူတွေကကြော်ငြာကိုအဲဒီလိုခံစားခဲ့ရလား။ တူတူပဲ၊ “ ငါ့ရဲ့ထုတ်ကုန်ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲဆိုတာလူတွေကိုဘာကြောင့်ငါပြောတာလဲ၊
29:2011 pm တွင်အောက်တိုဘာ 11, 20
ငါ "icky" ကရှင်းပြဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ ငါထင်တာကတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာလိုအပ်တဲ့ဆိုးသွမ်းမှုပဲ။ ဒီ ၀ န်ဆောင်မှုတွေဟာပေါက်ကွဲနေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်တစ်ယောက်ယောက်ကသူတို့ကိုသုံးနေတယ်။
30:2011 pm မှာအောက်တိုဘာ 8, 35
ပိုမိုနှစ်သက်သော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်စျေးနှုန်းများရဲ့အမည်များလား။
30:2011 pm တွင်အောက်တိုဘာ 4, 55
ငါရှောင်ရှားရန်ငါကြိုးစားနေခဲ့သည်ပြောနိုင်, Kenan? 🙂ကျွန်ုပ်သည် Socialkik နှင့် Retweet.it နှင့်ကံကောင်းခဲ့သည် - နှစ် ဦး စလုံးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုနှင့်တုံ့ပြန်ချက်များပေးသည်။
30:2011 pm မှာအောက်တိုဘာ 11, 49
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး အနေဖြင့်ကြိုက်နှစ်သက်သောအမြင်များ၊ အမြင်များနှင့် +1s များကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုအတွက်ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ရပ်တည်ချက်ကိုကျွန်ုပ်သဘောတူသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်မဟုတ်သောနယ်ပယ်တွင်အလားတူပြုလုပ်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများအများအပြားရှိသည်။ ဆုများ၊ ပြိုင်ပွဲများ၊ မက်လုံးများဖြင့်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း၊ ကူပွန်များ - ၄ င်းတို့အားလုံးသည်အချိန်၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်စေ့စပ်မှုများကို“ ၀ ယ်” ရန်ရည်ရွယ်သည်။
ဒါပေမယ့်မျဉ်းကြောင်းဘယ်မှာဆွဲသလဲ။ အကြိုက်များ၊ အမြင်များနှင့် +1s များကို ၀ ယ်ခြင်းသည်ယုံကြည်မှုကိုပျက်ပြားစေသည်။ သင့်ရဲ့ဖောက်သည်ဟာအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ဗွီဒီယိုပါသောကြောင့်သူတို့အမြင်များကို ၀ ယ်ယူကြောင်းလူသိရှင်ကြားဖော်ပြလိုပါသလား။ ကျွန်ုပ်သည်အဖြေမှာမဟုတ်ဟုသံသယရှိသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဖောက်သည်မှာသူတို့ဖောက်သည်တွေသူတို့ရဲ့လက်ရှိဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူတည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့်သူတို့မပျက်စီးစေချင်ဘူး။
နောက်ဥပမာတစ်ခု - ဂူဂဲလ်နေရာများပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကို Fiverr ကဲ့သို့သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်များတွင် ၀ ယ်နိုင်သည် (http://fiverr.com/ သို့မဟုတ်သို့မဟုတ် Elance (https://www.elance.com/ ) ။ အင်တာနက်ပေါ်တွင် ၀ င်ရောက်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမပြုလုပ်ရန် ပို၍ စိတ်ပျက်စရာမရှိပါ။ ငါစားသုံးသူတစ် ဦး အဖြစ်, ငါစားရန်နေရာရှာဖွေရေးအတွက်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုသွားပါလိမ့်မယ်။ ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုငါတွေ့ရင်သူတို့ကိုဖတ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာပါ။ အကယ်၍ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါကအစားအစာကိုဘယ်တော့မှမကြိုးစားခဲ့ဖူးသောနေရာ၌ခြေမလျော့သောလူများကရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်စနစ်ကိုမယုံကြည်နိုင် (http://agtoday.us/vyVjXn တွင်ကြည့်ပါ။ )
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်တရား ၀ င်သောရှုထောင့်လည်းရှိသည် - ထောက်ခံချက်များနှင့်ထောက်ခံစာများကိုအတည်ပြုသည့်အမေရိကန်ဖက်ဒရယ်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင် (FTC) လမ်းညွှန်ချက်များကိုကြည့်ပါ။http://www.ftc.gov/opa/2009/10/endortest.shtm ) ။ အကြိုက်ဝယ်ခြင်းသည်ထောက်ခံချက်တစ်ခုကိုဝယ်ယူခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်ငြင်းဆိုနိုင်သည်။ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါကဝယ်သူသည်တရားစွဲဆိုခြင်းနှင့်ဒဏ်ငွေပေးခြင်းခံရနိုင်သည်။
အတွေးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် (ဟုတ်တယ်၊ မင်းကိုမင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်လို့ထင်တယ်၊ မင်းရဲ့ရုံးခန်းတံခါးကိုမင်းရဲ့ရုံးခန်းထဲကိုထည့်ထားလို့ရတယ်) ။ ဤဆောင်းပါးကိုသင်ရေးခဲ့ခြင်းကစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ ကြော်ငြာခြင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး၏အားနည်းချက်ကိုနားလည်စေသည်။ မင်းကြိုက်တာကိုကြိုက်တယ်
ဘေးထွက်မှတ်စု - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင် ၀ ယ်ယူသင့်သည်ကိုအရေးကြီးသည့်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ၀ န်ဆောင်မှုရရှိရန်နှင့် ၀ ယ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်စဉ်းစားသင့်သနည်း။
30:2011 pm တွင်အောက်တိုဘာ 4, 51
နောက်လိုက်များ ၀ ယ်ခြင်းသည်အလွန်ပင်ဆိုးရွားသည်ဟူသောအယူအဆကိုလုံးလုံးလျားလျားပယ်ချခဲ့သည့်ထိုသူများအတွက်မူသူတို့၏စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည့်နှိုင်းယှဉ်မှုတစ်ခုကမ်းလှမ်းလိုပါသည်။ Super Bowl အတွက်ကြော်ငြာတစ်ခုပေါ်တွင်သန်းပေါင်းများစွာသော Budweiser၊ Coca Cola, Nike, Ford, ကြီးမားသောကုမ္ပဏီများအားလုံးသုံးစွဲသောအခါကျွန်ုပ်တို့အားလုံးစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ကုန်ကြသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏လူကြိုက်များမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ထိုကြော်ငြာကိုထုတ်လွှင့်ရန်အခွင့်အရေးရရှိခဲ့သလား။ မဟုတ်ပါ၊ ဝယ်လိုက်ကြသည်။ အဖြစ်မှန်ကတော့စျေးကွက်သမားတွေအနေနဲ့ငါတို့ဖောက်သည်တွေ၊ အလုပ်ရှင်တွေ၊ ပစ္စည်းတွေကိုပိုရောင်းဖို့ပစ္စည်းတွေကိုလုပ်တာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုရေးကိစ္စရပ်များတွင် Dr. Jekyll နှင့် Mr. Hyde တို့၏အခိုက်အတန့်ကိုကြုံတွေ့ခံစားနေရသည်။ တစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်လူမှုရေးအတွေ့အကြုံ၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကိုထိန်းသိမ်းလိုသော်လည်း၊ လူမှုမီဒီယာ၏ဆိုလိုရင်းနှင့်စိတ်ထားကိုချိုးဖောက်သည်ဟုထင်ရသည့်အကောင်းဆုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများထက်နည်းသောအချိန်ကိုမျက်ခြည်မပြတ်ပါ။
30:2011 pm တွင်အောက်တိုဘာ 4, 53
စားသုံးသူများကဤအယူအဆတွင် Marty ကိုပိတ်မိနေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သေချာပေါက်သိပါသည်
30:2011 pm တွင်အောက်တိုဘာ 8, 19
ကျယ်ပြန့်သော RTs နှင့် + 1s ဝယ်ယူမှုများသည်နယ်ပယ်ရှိစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သို့အထောက်အကူပြုသနည်း။ သင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သေးငယ်သောအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ဆရာများသို့မဟုတ်ကလေးအထူးကုများကဲ့သို့သောကျဉ်းမြောင်းသောအုပ်စုများကိုအာရုံမစိုက်နိုင်ပါ။
နယ်ပယ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ချဉ်းကပ်နည်းသည်အခြားဆိုရှယ်မီဒီယာနည်းလမ်းများဖြင့်နယ်ပယ်နှင့်ကျဉ်းမြောင်းသောတည်ဆောက်မှုကိုတည်ဆောက်စဉ်ကျယ်ပြန့်သောနံပါတ်များအတွက် ၀ ယ်နိုင်သည့်စွမ်းအားကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးစားခြင်းလား။
30:2011 pm တွင်အောက်တိုဘာ 8, 53
မည်သူမဆို retweets (သို့) ကြိုက်နှစ်သက်မှုဘယ်ကနေလာသည်ကိုသုတေသနပြုသူမည်သူမဆိုသုတေသနပြုသည်ကိုငါမသိ, ဒါကြောင့်ပစ်မှတ်ဟာနယ်ပယ်ကျယ်ပြန့်သည်ဖြစ်စေအရေးကြီးတယ်ဆိုတာမသေချာဘူး။ နယ်ပယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏အားသာချက်မှာကျယ်ပြန့်သောခေါင်းစဉ်နှင့်အတူကဲ့သို့ကြီးမားသော volumes များကိုမျှော်လင့်။ မရနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။